Kangton - Momba anay - Kangton Industry, Inc.
Kangton Industrial, Inc. dia mpamatsy vahaolana amin'ny tetikasa avo lenta amin'ny Floor Floor, Door ary Cabinet.
Hatramin'ny 2004, nizara tsena tsara manerantany izahay, indrindra tany Amerika Avaratra, Eropa, Aostralia ary Amerika atsimo.
Flooring Vinyl ara-barotra, Flooring SPC henjana, Flooring vita amin'ny injeniera mafy, Flooring SPC hazo, Flozy laminate, Floodie bambou, ary fametahana WPC
Varavarana voalohany, varavarana hazo, varavarana misy laharana afo, varavarana fidirana mafy
Kabinetra ao an-dakozia, fitafiana ary trano fanamoriana
Miaraka amin'ny mari-pahaizana CE, Floorscore, Greengard, Soncap, FSC ary fitsapana avy amin'i Intertek sy SGS.
Ny vokatray dia avo lenta avo lenta, eken'ny orinasa marika, trano, mpamorona ary mpivarotra ambongadiny lehibe eran'izao tontolo izao. Azonao atao ny mahita ny entanay amin'ny tetikasa samihafa any Amerika Avaratra, Eoropa, Aostralia, Azia atsimo atsinanana, Amerika atsimo, Mi- Atsinanana sy Afrika.
Kangton mifidy ireo mpiara-miasa stratejika miaraka amina fari-pahaizana momba ny kalitao iraisam-pirenena. Mifehy faran'izay tsara ny kalitao izahay ary manome fanaraha-maso QC mandritra ny famokarana ary alohan'ny hametrahana. Ny mpanjifanay rehetra dia handray ny tatitra QC miaraka amin'ny sary amin'ny antsipiriany isaky ny fandefasana. Tompon'andraikitra amin'ny vidin'ny fifaninanana mahery vaika izahay, kalitao ambony ary mampivelatra vokatra vaovao.
Misy ny serivisy DDP, ao anatin'izany ny fandefasana, ny haba, ny haba, ny sarany isan-trano. Ny tanjonay dia ny hamorona lanja fanampiny ho an'ny mpanjifanay ary hiara-mivoatra.
Na inona na inona ilainao amin'ny varavarana, gorodona na kabinetra, mino izahay fa hanome anao ny vahaolana matihanina tsara indrindra i Kangton.
Fa maninona Kangton?
Ao Kangton no ahitanao ny varavarana ara-barotra ambony, gorodona sy kabinetra hifanaraka amin'ny tranonao amin'ny fomba lavorary.
Ao Kangton dia hitahiry ny vidiny sy fotoana mety indrindra ilaina ianao.
Ao Kangton dia hahazo ny vahaolana matihanina azo antoka sy serivisy tena tsara ianao.
Nanomboka tamin'ny 2004, Kangton Industry, Inc. niditra an-tsaha fananganana fitaovana miaraka amin'ny fanohanan'ny mari-pahaizana ISO, CE. Miaraka amin'ny fampiroboroboana matanjaka amin'ny B2B sy fampirantiana, Kangton fantatry ny mpividy iraisam-pirenena, mpamolavola ary orinasam-pananana iraisam-pirenena, ho iray amin'ireo mpamatsy vahaolana matanjaka indrindra any Sina.
Kangton dia manome ny sakany feno indrindra, manolotra safidy maro samy hafa hifanaraka amin'ny tsiro rehetra, trano na varotra, anatiny na ivelany, nentim-paharazana na ultra-modern, mahazatra na fasion, tsotra na manokana. Tongasoa ihany koa ny OEM. Tsy nofinofy ao Kangton ny fananana trano tsy manam-paharoa.
Ny tsipika famokarana kilasy voalohany sy ny fitaovana ampitaina avy any Alemana sy Japon, dia mahatonga an'i Kangton Door, gorodona ary kabinetra ho avo lenta. Politika fanaraha-maso ny kalitao henjana manoloana ny fomba fiasa mandritra ny famokarana dia miantoka ny kalitaon'i kangton izay ambony indrindra 3 ao Shina. Ohatra, ny hazo nofidianay tanana dia mizara ho kilasy A, B, C, D miaraka amin'ny vilan'ny maina 8-10%. Ny ekipa QC tsy miankina dia mivezivezy amin'ny entana rehetra alohan'ny fandefasana. Kangton tena manolotra entana izay hanome fahafaham-po anao tsara.
Ny maha tompon-tany ny orinasa amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola no fomba ahafahan'i Kangton maka teny nidina ambany kokoa avy amin'ny orinasa. Kangton manondrana varavarana mihoatra ny 120.000 pcs isan-taona, ny fividianana vola be dia be no mahatonga an'i Kangton amin'ny vidiny lafo indrindra. Ankoatr'izay, mba hanampiana ny mpanjifa hahazo tombony bebe kokoa ary hanana fifaninanana vidin-javatra eo amin'ny tsenany, dia mitazona tombony ambany i Kangton. Ireo lafin-javatra telo ireo dia manome antoka anao handoa vola ambany indrindra amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'i Kangton.
Safidio ny Kangton dia midika fa misafidy ekipa teknika matihanina hiasa ho anao ianao. Ny injenieranay dia teo amin'ny sehatry ny haingon-trano nandritra ny 17 taona mahery ary afaka nanolotra anao ny safidy malalaka indrindra amin'ny rafitra, ny endrika ary ny fametrahana.
Ny Kangton dia amidy amin'ny firenena erak'izao tontolo izao ao anatin'izany i Etazonia, Kanada, ny Vondrona eropeana, Aostralia,
Japon sns, izay manome ny ekipa mpivarotra Kangton manana traikefa sy fahalalana feno amin'ny filan'ny tsena.
Tongasoa ary safidio Kangton
miaraka isika afaka manangana ho avy mamiratra.